Yongeza: Chonga, Yandisa, Linganisa, Lungiselela, uLawula | Martech Zone
Yongeza: Chonga, wandise, ulinganise, ulungiselele, ulawule
NgoLwesibini, Oktobha 1, 2013 NgoLwesihlanu, Septemba 27, 2013 Douglas Karr
Iinkampani azisebenzisi amandla anamandla ngaphakathi xa kuziwa kwimidiya yoluntu. Sijonge lonke ixesha njengoko iinkampani zisebenzisa i-1 okanye i-2 yemidiya yoluntu ukulawula ubukho beendaba zentlalo. Basebenza nzima, basasaza umxholo omkhulu, kodwa bakwibubble yabo xa kuziwa ekukhuthazeni umxholo wabo. Ukuba ufuna ukukhuphisana ngenene, kutheni ungasebenzisi abasebenzi bakho ukukunceda ubhengeze ubukho bakho kwi-Intanethi?
Yongeza ivumela iinkampani ukuba zibeke iliso kwaye ziphucule ubukho bezentengiso zabo ngokwenza ukuba kube lula kubasebenzi ukuba babelane ngomxholo onomdla kwaye kube lula kubarhwebi ukuba balandele ukuthatha kwabo inxaxheba kwaye bafikelele kuko.
Isicelo sihle kwaye silula. Abasebenzi bakho banxibelelana neenethiwekhi zabo zentlalo, bongeza iplagi yesikhangeli, kunye nokungena. Kwicala lasekhohlo, ubhala into ofuna ukwabelana ngayo, yongeza inqaku labucala labasebenzi bakho, kwaye ucofe ukukhuthaza! Ngoku ngamnye wabasebenzi bakho uza kubona umxholo oza kuwukhuthaza kwiscreen sabo:
Isebenza njani iAdvocate?
Chonga - Abasebenzi bakhetha ukungena kwinkqubo yeAddococate kwaye baseta iprofayili, bekubonisa ngqo ukuba ngubani omele uphawu lwakho kwintlalo. Zonke iiprofayili zinokucwangciswa ngamaqela, zikhangelwe ngamagama, isiphatho se-Twitter, isebe okanye iseti yobuchule yokufumana ujongano olubanzi kunye nolungelelwanisiweyo kwinethiwekhi yakho. Oku kwenza ukuba kube lula kakhulu ukulandelela ukuba ngubani osebenzayo, bangaphi abantu ababandakanyekayo, kwaye umntu ngamnye ubekwa njani kumbutho wakho.
ikhulise -Ukuba umqeshwa ufumana into enomdla kwi-Intanethi, bacofa nje ulwandiso lwe-Addvocate kwi-toolbar yabo yesikhangeli ukucebisa ngeposi kwabo usebenza nabo, ukongeza inkcazo emfutshane yokuba yintoni umxholo kwaye kutheni kufanelekile. Njengoko abasebenzi bakhangela imijelo yabo, banokukhetha into abafuna ukwabelana ngayo neenethiwekhi zabo, bagqabaze ngezithuba, kwaye baqhubeke nencoko ngokucebisa ngomnye umxholo ofanelekileyo.
Phakathi (Ushicilelo lweshishini kuphela) -Ukuba umqeshwa acebise isithuba, singena kulayini wokumodareyitha, apho iimodareyitha zakho ziphonononga kwaye zivume ukuqinisekisa ukuba kukwabelwana ngomxholo ofanelekileyo kuphela. Iimodareyitha nazo zinokucwangcisa xa izithuba zingena kumsinga, kwaye zicebise umxholo kubantu abathile, amaqela, okanye amasebe ukukhuthaza ukwabelana ngokukuko.
Ukulinganisa -Izihlomelo kubahlalutyi makulandelele yonke into, kubandakanya ii-URLs ezimfutshane kunye neekhowudi zomkhankaso, ukulinganisa ukufikelela kwakho kokwenyani eluntwini. Ungafumanisa ngokuchanekileyo ukuba bathini abantu, indlela abaphendula ngayo iinethiwekhi, kwaye zeziphi iinkampani zemithombo yeendaba zentlalo yakho.
ukwandisa -Ngokuqhubekayo yandisa ukufikelela kwakho usebenzisa iAddvocate's kubahlalutyi ukuphucula nokucokisa imiyalezo yakho. Yenza umxholo olungiselelwe ukuxhasa izihloko ezithandwayo, ukulandelela ezona ntsuku zisebenzayo zeveki, kunye nomxholo wefaneli kubasebenzi bakho abanempembelelo.
Bamba (Ushicilelo lwamashishini kuphela) -Kwinkqubo yeAdvocate, abasebenzisi bamenyiwe kwaye bavunyelwe ukufikelela kwiiakhawunti ezinophawu. Nje ukuba bashiye umbutho, ezi zinto zikhutshiweyo ziphelelwa ngoko nangoko, ukuvumela ukufikelela kumgaqo olandelwayo kube yinkqubo elula kakhulu.
Iidosi kunye neeNtengiso zeNtengiso
Ophumeleleyo kuLawulo lweProjekthi ye-Arhente: Brightpod
Okt 1, 2013 ngexesha 9:22 AM
Enkosi ngokwabelana noDoug! Bekumnandi ukufunda! Enkosi ngokunika iintloko phezulu!